Sun, Aug 19, 2018 | 07:17:46 NST
16:09 PM (5months ago )
पुष्प घलान/उज्यालो ।
देउवा नेतृत्वको कार्यकालमा कांग्रेसले चुनावमा पराजय व्यहोर्नुप¥यो । यहि तर्क गर्दै कांग्रेसका युवा नेताहरुले देउवाको बिकल्पको खोजी गरिरहेका थिए । अब फेरि पनि देउवा नै शक्तिमा पुग्नुले कांग्रेसलाई फाइदा भन्दा पनि घाटा बढी लाग्ने कतिपयको तर्क छ ।
पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउने र सुदृढ बनाउने बहस चलिरहेका बेला दलको नेतामा देउवाको पुनरागमनका बारेमा विभिन्न विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेसको भन्दा पनि गुटको मात्र सभापति बनेको आरोप लागेका देउवाले आरोपलाई असत्यतामा परिणत गर्ने संभावना भने कम देखिन्छ । श्रीमति आराजु राणालाई शक्तिमा पुर्‍याउने उहाँको प्रयास र पार्टीलाई दुई नजरले हेर्ने देउवाले नानीदेखिको बानी छाड्ने संभावना कम रहेको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा पहिलो पार्टी दोस्रोमा पुग्दासमेत हारको समिक्षा गर्न तयार नभएका देउवा फेरि शक्तिमा पुगेपछि कांग्रेसले अब कस्तो रणनीति अपनाउला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका युवा नेताहरुको भविष्य अब के होला ? र उनीहरुले कस्तो रणनीति अपनाउलान् ? त्यो भविष्यले निर्धारण गर्ला । तर पार्टीलाई जिवन्त तुल्याउन सक्ने सपना देखेर देउवालाई संसदीय दलको नेतामा जिताए कि ? देउवाको छत्रछायाँमा बस्ने आशाले जिताए भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
विधि विधान भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रित नेताको पछि लाग्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तीले कांग्रेस अछुतो छैन । कांग्रेसलाई अबको ५ वर्षमा पहिलो पार्टी बनाउने र युवामैत्री बनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने माग बढिरहेका बेला देउवा शक्तिशाली हुँदै जानु भएको छ ।
सार्वजानिक रुपमै युवा नेताहरुले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका बेला उनीहरुको मागको औचित्यलाई संसदीय दलको चुनावले झड्का दिएको छ । गुटउपगुटबाट ग्रस्त भएको कांग्रेसमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने भन्दा पनि नेताहरु आ–आफ्नो अस्तित्व जोगाउनेतर्फ लागेको पुष्टि भएको छ ।
कांग्रेसको अबको गन्तव्य कता ?
नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकदमी गर्दै आएको कांग्रेस तीन तहको निर्वाचनमा नराम्ररी पछारिएको छ । देशभर पार्टी संगठन र राम्रो जनमत हुँदा हुँदै पनि कांग्रेसले अनपेक्षित परिणाम व्यहोर्नुपर्‍यो । तीनै तहको चुनाव पूरा भएर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन भईसकेको अवस्थमा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका बस्नु पर्ने भएको छ ।
सरकारकारको कामकारवाही बारे निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठन गर्न लागेको कांग्रेस आन्तरिक कलहबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यस अवस्थामा केही युवा नेताहरुले नेतृत्व परिवर्तन गरी पार्टी सुदृढिकरण गर्नु पर्ने माग गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउने संभावना कम रहेको छ ।
५ वर्षमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने युवा नेताहरुको अभियानमा देउवाको पुनरागमनले कता डोर्‍याउने हो भन्ने आमचासो बढेको छ । प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनहितमा हुने कामका लागि सरकारकालाई रचनात्मक सहयोग गरे कांग्रेस पहिलेको बाटोमा नपुगिएला भन्न सकिन्न ।
यसका लागि पहिलेको गल्ति कमजोरीलाई सुधार गर्दै देउवाले सिंगो पार्टीको नेता बन्न सक्नुपर्नेछ ।